Afgembi militari oo ka dhacay dalka Guinea | Universal Somali TV
Wararka ka imaanaya dalka Guinea ayaa sheegaya in afgembi militari uu ka dhacay dalkaasi, ka dib markii ciidamo militari ah oo gadood sameeyay ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen Madaxweynihii dalka, Alpha Conde.
Rasaas xoogan ayaa maanta laga maqlay nawaaxiga Aqalka Madaxtooyada ee Caasimadda Conakry. Goobjoogayaal ayaa sheegay in rasaastaasi u dhaxeysay Ciidamada Militariga iyo Ilaalada Madaxtooyada.
Muuqaal goor sii horeysay lagu baahiyay barraha bulshada ayaa waxaa ka soo muuqday Madaxweynaha oo ku jira qol, ayna ku gadaaman yihiin ciidamada gaarka ah.
Korneyl Mamady Doumbouya oo ka soo muuqday Telefishinka Qaranka ayaa sheegay in la xiray Madaxweynaha, isagoona dadka ku wargeliyay inay guryahooda jooggaan.
"Milatarigu waxay la wareegeen talada dalka Guinea, waxay kala direen Xukuumaddii Conde, waxayna xireen xuduudaha dalka." Ayuu yiri Korneyl Doumbouya.
Doumbouya waxaa uu sheegay inay ka caroodeen ku tumashada muwaadiniinta iyo sida aanu Madaxweynuhu u ixtiraameen sida uu yiri mabaadi'da dimoqraadiyadda.
Madaxweyne Conde oo aan si rasmi ah loo ogeyn halka uu ku sugan yahay ayaa mar 3aad bishii October ku guuleystay madaxtinimada dalkaasi, ka dib markii bishii March ee sanadkii hore (2020) uu wax ka bedel ku sameeyay dastuurka dalkaasi, oo xadidayay in laba jeer oo keliya la dooran karo Madaxweynaha.
Madaxweynaha 83 jirka ayaa mucaaradad xoogan kala kulmay mucaaradka dalkaasi, oo ku dooday in doorashada uu ku shubtay, iyadoona ay dalkaasi ka dhaceen mudaaharaadyo rabshado wata oo mucaaradka ay gadaal ka riixayeen. Tani ayaana xoojisay walaacii laga qabay xiisado siyaasadeed oo hor leh oo ka dhaca gobol ay horey uga dhaceen inqilaabyo ka dhacay Mali iyo Chad.
Kan-xigaTaliban oo ku dhawaaqday inay la ware...
Kan-horeGantaalo lagu weeraray Garoonka Diyaa...
62,035,004 unique visits